Gabdhaha iyo wiilasha ka weyn 18 sano | dinarattigheter
Haddii aad ka weyn tahay 18 sano adiga ayaa go’aansan karo meesha aad rabto in aaad degto guri adiga kuu gooni ahna waad samaysan kartaa, haddana waxay noqon kartaa in aad ku qasbanaato in aad ka guurto gurigaagi oo ka cararto qoyskaagi ama cidkale oo ay Qatar kaaga imaanayso haddii aad sii deggenaato.
Markas waxaad caawinaad ka heli kartaa xafiiska adeegga bulshada in uu ku geyn kara meel qarsoodi ah oo aad si ku meel gaar ah ugu noolaato. Waxaadna taas sida ugu sahlan ugu samayn kartaa adiga oo waca taleefanka guud ee isku xiraha ee degmada aadna weydiiso xafiiska adeegga bulshada qaybtooda qaabillaadda. Degmooyinka qaarkood waxay leeyihiin rug qaabilaad ee xasilloonida dumarka oo aad tagi kartid, haddii kale waxaad jiri kara heeganka dumarka. Haddii ay jirto heeganka dumarku adiga ayaa toos ula xiriiri kara, adiga oo aan marin xafiiska adeegga bulshada. Heeganka dumarku badanaa waa ay ku yaalaan degmo kasta, waana urur ay aasaaseen dumar si ay u taageeraan oo u caawinaan dumar kale. Heeganka dumarku waxay leeyihiin meelo la dego oo qarsoodi ah oo luugu tala galay dumarka caawinaad u baahan badanaana waxay ku yaallaan adareesyo sir ah. Marmar waxaa dhici karta in loo baahdo in loo guuro heegan dumar oo ku yaal magaalo kale si ammaan buuxa loo helo. Heeganada dumarku waxay leeyihiin shaqaale ay caadi u tahay in ay la shaqeeyaan gabdhaha iyo dumarka dhibban. Waxaa kaloo meeshaas ku noolaan kara dumar kale oo qibrad taas la mid ahi ay soo martay. Dumarkaasi waxay noqon karaan taageero fiican oo lala hadlo, oo ka dheeraad ah shaqaalaha. Waxaad kaloo ka heli kartaa caawinaad ah in aad hesho guri kuu gaar ah oo aad muddo dheer ku noolaan kartid.
Haddii aad tahay wiil ka weyn 18 sano waxaad caawinaad ka heli kartaa xafiiska adeegga bulshada, in lagu geeyo degaan qarsoodi ah oo ku meel gaar ah. Taasna waxaad sida ugu sahlan ugu samayn kartaa adiga oo waca taleefaka guud ee isku-xiraha ee degmada waydiiyana xafiiska adeegga bulshada qaybtooda qaabilaadda. Adiga oo aan sheegina qofka aad tahay ayaad wici kartaa haddii aad qabto su’aalo ayna jiraan waxyaalo aad ka fakarayso. Waxaa kaloo kaa caawini kara in ay su’aalaha aad qabto kaaga jawaabaan heegamka dhibbanayaasha. Maanta waxaa jira degaano qarsoodi ah oo loogu tala galay wiilasha loo geysto xoog-sheegadka la xiriir arrimo sharafeed. Haddii ay ku yaalaan degmadaada iyo haddii kalaba waxaa waajib ka saaran yahay xafiiska adeegga bulshada ee degmadaad in ay ku caawinaan. Xafiiska adeegga bulshadu waxay lahaan karaan guryo heegan ah oo loogu tala galay markii ay xaalddu kedis tahay ama waxay borobaleemka ku xallin karaan guryaha hebeen dhaxa ama hotel.